ZMI PurPods Pro nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa | Gam akporosis
ZMI PurPods Pro nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa
Ọzọ metụ aka Nyocha igweisi na Androidsis. N'oge a anyị nwere ụfọdụ pụrụ nnọọ iche, ndị ZMI PurPods Pro. Headfọdụ ekweisi na ọ bụrụ na maka ihe ha jikwaa na-adọta uche na oge mbụ, ọ bụ ịrụ ụka adịghị ya n'ihi ha nnukwu ihe yiri AirPods Pro nke Apple.
Enweghị ogige na na a "doro anya" nke doro anya na isi okwu a ma ama n'ime ụwa, ZMI PurPods Pro na-ewepụta ego ha iji banye n'ahịa ahịa ekweisi TWS zuru oke site na ịnye ngwaahịa nke ọtụtụ nabatara na njikere. Y’oburu n’icho isi Apple, ma ị gaghị ewetali ha, nke a bụ nhọrọ magburu onwe ya
1 ZMI PurPods Pro, ọtụtụ karịa imewe
2 Iwepu ZMI PurPods Pro
3 Nke a bụ otú ZMI PurPods Pro si dị
4 Atụmatụ ndị ZMI PurPods Pro nyere
5 ZMI PurPods Pro arụmọrụ chaatị
ZMI PurPods Pro, ọtụtụ karịa imewe
Dị ka anyị kwuru na mbido, imewe, na nke a tremendously yiri Apple's AirPods Pro, bụ nke mbụ n'ime ebe nkiri nke ZMI PurPods Pro. N'etiti ndị na-eri teknụzụ, e nwere ụzọ abụọ dị iche iche. Ndị na-achọ ngwaahịa na-apụta maka ebumnuche ha. Ndị na-adọrọ mmasị site na imepụta ngwaahịa "kachasị" kachasị na ahịa, ndị yiri ya na-ebugharị ya.
Na-enweghị nyocha uru ndị ZMI PurPods Pro ndị a nwere ike ịnye anyị, nke anyị ga-ekwu maka n'okpuru, ụdị ya na njedebe bụ ezigbo ndị na-agba ume. Nhọrọ nke agba ọcha na-acha ọcha adịghị ka ihe ndabara. Ma ihe ijuanya, imewe abụghị gị kasị dị ike ngwá agha mgbe a bịara n’ozi ọma. Jide nke ZMI PurPods Pro maka ọnụahịa karịrị nke ọma.
Iwepu ZMI PurPods Pro
Anyị lere anya n'ime igbe nke ekweisi ikuku ndị a ịgwa gị ihe niile anyị hụrụ. Dị ka ọ na-adịkarị mgbe niile, ọ bụghị ihe ịtụnanya ma ọ bụ mgbakwunye na-atụghị anya ya. Na holster / chaja na ekweisi n'ime. A chaja nja na usoro USB Cdị C dị mkpụmkpụ karịa nke nkịtị.
Gụnyere ụfọdụ akwụkwọ ikike metụtara akwụkwọ nke ngwaahịa na-ahụkarị ndu ejianyị nwere okpukpu abụọ nke pad dị iche iche. Ma ọ dịghị ihe ọzọ.
Nke a bụ otú ZMI PurPods Pro si dị
Na-ele anya na ZMI PurPods Pro na-akwụ ụgwọ ikpe anyị na-ahụ otú ọdịdị ya, na-echetara anyị nke Apple ugboro ugboro AirPods Pro. Ọ bụ ezie na n'ọnọdụ a, anyị na-ahụ ahịrị ndị pere mpe na njedebe. Anyị na-ahụ n'ihu ya a bọtịnụ, na njirimara onye nrụpụta, nke ga-enyere anyị aka rụọ ọrụ pairing na ngwaọrụ anyị, ọ dabere na agba, mara ọnọdụ batrị.
Su mkpuchi magnetized mechiri emechi ma anyị na-ahụ ezigbo ihe eji arụ ụlọ. Notice hụrụ ngwaahịa kọmpat na gbakọtara nke ọman'agbanyeghị na oghere mepere.
Na ala anyị na-ahụ ọdụ ụgbọ mmiri, na nke a na Typedị USB Type-C. Otu nkọwa dị mkpa iburu n'uche na ọ dịghị ihe ọzọ ma ọ bụghị ịgbakwunye isi ihe dị na ihu ọma bụ na ZMI PurPods Pro nwere Nchaji ikuku, nnọọ ihe ijuanya.
Nwere ike nweta ugbu a ZMI PurPods Pro na Aliexpres naanị euro 36.
Ekweisi onwe ha nwere "udi" udi ọ bụ ezie na akụkụ nke etinyere na ntị nwere Ọkpụkpọ "na ntị" ya emechaa ihe mkpuchi roba na ọtụtụ echiche na-akpali. Dị ka anyị na-ekwu mgbe niile, otu ma ọ bụ usoro ọzọ na-enwe mmeri dabere na ahụmịhe nke onye ọrụ ọ bụla. Na nke a anyị nwekwara enwere ike igbanwe mpempe akwụkwọ ka mmetụta ikuku wee bụrụ ihe kachasị mma.
Akụkụ nke dị n'èzí ntị na-emegharị n'ụzọ zuru oke na ihu ekele maka a omume ọma e kere curved udi. Na njedebe bụ ndị Magnetik atụdo maka a zuru okè kwesịrị ekwesị na Nchaji ikpe. Ejikwa ha mmetụta sensọ maka playback njikwa na ihe mmetụta dị nso.
Atụmatụ ndị ZMI PurPods Pro nyere
Dị ka anyị kwurula, myirịta dị na ekweisi ama ama abụghị ebe kachasị dị egwu. Anyị nwere ike ikwu nke ahụ ZMI PurPods Pro pụtara ndị ọzọ, karịsịa n'ime price Atiya na nke ọ na-emi odude, na ya ibu nke batrị na nnwere onwe. Anyị chọtara a 490 mAh ikpe ụgwọ. Na ikike nke Isi ekwe 48 mAh ọ bụla. Nke a na-enye anyị ngụkọta obodo kwụụrụ onwe ya karịa awa iri anọ enweghị mkpa ịgba ụgwọ.
Na mgbakwunye, ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịmara na ZMI PurPods Pro nwere ụgwọ ngwa ngwa. N'ihi ya, na ibu nke Nkeji 15 anyị nwere ike ibili na 50% nke ibu na ekweisi. Na jiri ụgwọ naanị 5 nkeji, dabere na nnwere onwe maka awa 4 na ọkara. Ọ dịkwa mma ịmara na anyị nwere ike ịgba ha ụgwọ chaja ikuku ọ bụla na-enweghị mkpa plọg. Zụrụ nke gị ZMI PurPods Pro ọnụahịa kacha mma.
La nọ n'ọrụ mkpọtụ nkagbu Ọ bụ otu n'ime atụmatụ ndị a na-achọkarị mgbe anyị chere echiche gbasara ịzụ ekweisi ikuku. ZMI PurPods Pro atụmatụ atọ olu maka nke a ma nye ezigbo ahụmịhe mgbe a bịara n’ịgbachi nkịtị na mkpọtụ niile gbara anyị gburugburu. Ma ọ bụrụ na anyị pụọ maka ọsọ, ma ọ bụ na anyị chọrọ ịma ihe na-eme dị nso, anyị nwere ike ịgbalite uzo nke anyi ji weghara ụda ndi ozo.
ZMI PurPods Pro dịkwa njikere ihe mmetụta dị nso. Ihe bara uru nke ukwuu akpaka na-akpaghị aka nke mmeghari ụda ma ọ bụrụ na anyị ewepụ ntị ntị. O nwekwara mmetụ mmetụta anyị nwere ike hazi nụrụ ụtọ ruo ihe dịka ụdị iwu 4.
N'ikpeazụ, otu ihe dị mkpa dị mkpa bụ na ZMI ụlọ ọrụ izizi jikọtara teknụzụ njikọta nke Bluetooth 5.2 nke ọma na ekweisi ya. Echere na njikọ ọ ga-akwụsikwa ike n’ebe dị 200 mita, ihe anyị na-enweghị ike igosipụta n'ụzọ zuru ezu yana na akwụkwọ dị ka akụkọ sayensị.
ZMI PurPods Pro arụmọrụ chaatị
Nlereanya PurPods Pro
Nkagbu Noise SI
Batrị ụgwọ ikpe 490 mAh
Isi igwe batrị 48 mAh
Ikuku na-akwụ ụgwọ SI
Nchịkọta nnwere onwe ruo awa 40
Nguzogide mmiri / uzuzu IPX4
Jụọ ikpe jikoro X x 52 63 23.4 mm
Nha ekweisi X x 37.5 23 25.6 mm
Ahịa 36.06 €
Linkzụta njikọ ZMI PurPods Pro
Ndụ batrị na atọ zuru ezu ụgwọ cycles nke ruo awa 40 na ngwa ngwa na ikuku ugwo ohere.
Innovation na njikọta teknụzụ Bluetooth 5.2
Njikwa aka na ihe mmetụta idi nso
Oke ike na olu na ebe kachasị elu ọ na-anọ obere mkpụmkpụ, karịsịa n'èzí na-enweghị arụ ọrụ mkpọtụ Mbelata.
La kenkowaputa ọcha na-acha ọcha na-emebi a na-ahụ ọkọ nchapụta ozugbo.
Ike olu dị ala
Chcha ihe nlezianya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » ZMI PurPods Pro nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa
A na-ekwupụta OnePlus Nord CE 5G na Snapdragon 750G na ọnụahịa dị oke ọnụ